Loza roa vita amin'ny vy tsy matevina 04
Sary Refy （mm） Manjavozavo (mm)
Ny fantsom-by vy dia mety amin'ny trano fisakafoanana, lakozia, trano ary fotoana hafa. Ny vokatray dia fantsom-pandrefesana mihombo, ny vokatray dia misy milentika tokana, fantsona roa sosona, fitoeram-pandeha telo sns. Raha manana fepetra hafa ianao, dia azonao atao ny manamboatra ny vokatra.
1. Fananganana vy tsy metaly 201 na 304 avo lenta, vita borosy, mateza ampiasaina ary mora diovina.
2. Ity fantson-drano ity dia misy efitrano vy tsy misy fangarony handraisana entana marobe izay mila fanasana haingana na kobanina amin'ny asanao. Ny fananganana maharitra azy io dia manome fahamarinan-toerana manampy amin'ny fiantohana fiainana lava maharitra amin'ny ankamaroan'ny tontolo iainana, ary mora ny mitazona azy.
3. Ity fantson-drano ity dia misy lovia lalina mahitsizoro iray handraisana entana marobe. Izy io koa dia afaka mitazona siny lehibe hanampiana amin'ny asa fanadiovana ankapobeny.
4. Ny sisiny mihorona dia manampy anao hitandrina ny tobin'ny toeram-piasanao amin'ny famerana ny famafazana sy ny safo-drano
5. Ny tongotra vy tsy misy fangarony azo alefa dia mamela anao hampidina ny filentehanao amin'ny sehatra tsy mitovy amin'ny fitoniana tsara indrindra.
6. Ny lamosina 10cm mitazona ny rindrinao ho maina. Ny lavaka precut dia misy ahafahana mandray faucet amin'ny rindrina.
7. Natolotra feno fonosana vonona hamory, hamonjy ny habaka sy ny vidin'ny kaontenera; mora mivory.
8. Ampiasaina be amin'ny lavarangana, lakozia, cantine, ozinina, hopitaly, fivarotana lehibe.
Izahay dia mandray ny tsipika famokarana mandroso mba hitazomana ny kalitao avo lenta, toy ny milina fanodinana HAN'S LASER, milina fanapoahana nomerika EUROMAC ary milina fanenjana CNC avy any Italia.
Ny mpiasanay dia manaraka hatrany ny fizotran'ny famokarana henjana manomboka amin'ny akora ka hatramin'ny fifehezana kalitao avy eo fonosana sy fitaterana.
Izahay dia mitsidika fitsidihana hatrany an'ireo mpanjifantsika mahazatra mba hahafantaran'izy ireo ny momba ny vokatray. Avy eo dia hanavao ny vokatray ho takian'ny mpanjifa izahay. Ny orinasanay dia mihalehibe amin'ny mpanjifa tsirairay.
Teo aloha: Fantsona vy tsy misy fangarony roa 02
Manaraka: Loza roa miaraka amin'ny tabilaon-drano 02
Fantsona vy tsy misy fangarony roa 02